Izindaba - “I-CHINAPLAS 2012 No. Inombolo 1 yase-Asia kanye Nombukiso Wezizwe Zonke Werabha Nopulasitiki Womhlaba ubuyela eShanghai ngo-Ephreli
“I-CHINAPLAS 2012 No. Inombolo 1 yase-Asia kanye Nombukiso Womhlaba Wombukiso Wamazwe Ngamazwe Werabha Noplastiki Wabuyela E-Shanghai ngo-Ephreli.
“I-CHINAPLAS 2012 ″ (i-26th China International Plastics and Rubber Industry Exhibition) izobuyela eShanghai kusukela ngo-Ephreli 18 kuya ku-21, 2012 futhi izobanjelwa eShanghai Pudong New International Expo Centre.
“I-CHINAPLAS International Rubber & Plastics Exhibition” yaqala ukubanjwa ngo-1983 futhi ineminyaka engama-25 yempumelelo. Ngukuphela kombukiso wezimboni ze-China Rubber ne-Plastics oxhaswe yi-EUROMAP, futhi yiChina kuphela ewine iGlobal Exhibition Industry Association. (UFI) Plastics egunyaziwe neMboni Yezimboni. Izinhlangano eziningi zepulasitiki zasekhaya nezangaphandle kanye nezinhlangano zemboni zenjoloba nezasezansi zisekela ngokugcwele, "I-CHINAPLAS International Rubber and Plastics Exhibition" isiphenduke inkundla ebalulekile yezinkampani zamazwe ahlukahlukene ukuthi zingene eChina nezimakethe ezisafufusa e-Asia, futhi zisungule inethiwekhi yokusabalalisa umhlaba wonke.
“I-CHINAPLAS 2011 ″ ivalwe ngempumelelo ngoMeyi 20. Lo mbukiso uhehe ababonisi abangu-2 435 abavela emazweni nezifunda ezingama-34, lesi sikali sifinyelele endaweni ephakeme ephezulu, edlula amamitha-skwele ayi-180,000, futhi umkhakha ubonwa njengeChinaplas yesibili ngobukhulu emhlabeni jikelele. Lo mcimbi wezinsuku ezine wawungakaze ubonwe, futhi isibalo sezivakashi safinyelela kwelinye irekhodi eliphezulu, safinyelela ku-94,084, okuyisibalo esikhuphuke ngo-15.5% kuneseshini yangaphambilini, okuyi-20.27% yabo kwakuyizivakashi ezivela emazweni aphesheya kwezilwandle kanye nasezifundeni.
Ngo-Ephreli 18-21, 2012, i- “CHINAPLAS 2012 ″ ibuyele eShanghai New International Expo Center. Isikali sizofinyelela ukuphakama okusha. Indawo yombukiso kulindeleke ukuthi ifinyelele kumamitha-skwele angama-200,000, kufaka phakathi izindawo zombukiso zemikhiqizo eziyi-11 kanye namaphasela kazwelonke ayi-11 / ezifunda ahlala kuwo wonke amahholo ayi-17 empumalanga, entshonalanga nasenyakatho nezimpiko zeNew International Expo Center.
Uhlelo olusha lweminyaka emihlanu lwaseChina, olungenisa amandla emakethe amasha
Ngesikhathi “soHlelo Lweminyaka Eyishumi Nambili Lweminyaka Emihlanu” (2011-2015), iChina izogxila ekwakhiweni kwezimboni eziyisikhombisa ezivelayo zamasu-ukulondolozwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo, ubuchwepheshe bezokwazisa besizukulwane esizayo, imboni yezimboni, ukukhiqizwa kwemishini ephezulu, amandla amasha, izinto ezintsha nezimoto zamandla ezintsha. Eminyakeni emihlanu ezayo, ukuthuthukiswa kwezimboni ezifana negridi ehlakaniphile, amandla omoya, amandla elanga, nezimoto zamandla ezintsha kuzokhipha isidingo esikhulu sezinto zobuchwepheshe obuphakeme, izinto eziguquliwe, i-bioplastics, iraba ekhethekile kanye nemishini yokulungisa amandla yokulungisa amandla. , kanye nokukhuthaza imboni yepulasitiki nenjoloba Thuthukisa.
IShanghai-enye yezindawo ezivuthiwe zokuthuthuka kwezomnotho nezimboni eChina
东 I-East China ingesinye sezifunda ezisheshayo futhi ezivuthiwe emnothweni waseChina, futhi ibuye ibe yi-R & D ebalulekile nesisekelo sokukhiqiza izinto zepulasitiki. Ngo-2010, ukukhishwa kwemikhiqizo yepulasitiki eMpumalanga yeChina kwafinyelela kumathani ayizigidi ezingama-24.66, okubalwa ngamaphesenti angama-42 omkhiqizo ophelele ezweni. IShanghai iyisikhungo seMpumalanga China futhi iyikhaya labakhiqizi abaningi abahamba phambili emhlabeni bemikhiqizo nemishini yenjoloba. Ngo-2010, inani eliphelele lemikhiqizo epulasitiki eShanghai lalingamathani ayizigidi eziyi-2.04, futhi ingqikithi yenani (okubandakanya i-polyester) kwakungamathani ayizigidi ezingama-4.906, okuwukukhuphuka kwama-27% ngaphezu kuka-2009. Njengamanje, iShanghai isungule isu lokuthuthuka okuqukethwe kwezobuchwepheshe kanye nenani eliphakeme elengeziwe.
Ngesikhathi "soHlelo LweShumi Nambili Lweminyaka Emihlanu", iShanghai izogxila ekwakheni izinto ezintsha ezifana namaplastikhi amasha obunjiniyela, ama-alloys epulasitiki, izinto ezihlanganisiwe eziguquliwe, izinto zokwakha nezinto zokuhlobisa, izingxenye zezimoto nezingxenye zokuhlobisa zangaphakathi nezangaphandle, izintambo zikagesi nezintambo ezibonakalayo kubuchwepheshe bolwazi nobuchwepheshe bezokuxhumana. , Njenge-polymer liquid crystal materials, izinto ezingabonakali, njll, ukuhlangabezana nezidingo zamaphrojekthi amakhulu futhi abalulekile njenge-aerospace, ubunjiniyela basolwandle, amandla omoya, ukwakhiwa kwezitimela zasemadolobheni. Ngakho-ke, uhulumeni wase-China uzothatha “uHlelo Lweshumi Nambili Lweminyaka Eyisihlanu” njengethuba lokuthuthukisa ngamandla izinto ezintsha zokwakha nemikhiqizo emisha enokuqukethwe okuphezulu kwezobuchwepheshe kanye nenani eliphakeme elengeziwe, futhi ethule nemikhiqizo esezingeni eliphezulu, ubuchwepheshe kanye nezixazululo ezivela emhlabeni wonke ukuhlangabezana izidingo eziphakeme zezimboni ezahlukahlukene ezisezansi. Faka isicelo. "I-CHINAPLAS International Rubber & Plastics Exhibition" ilandela inkambiso yentuthuko yomkhakha futhi yethula imikhiqizo emisha evela emhlabeni wonke yezimakethe zaseChina nezase-Asia.
Thatha indawo enhle yombukiso futhi ujabulele izinsizakalo ezinhle kakhulu zokuphromotha
Ababonisi abaningi babhukhe amadokodo ngonyaka ozayo ngaphambi kwesikhathi, futhi bayazethemba ukulungiselela omunye umbukiso embukisweni olandelayo. Amabhizinisi angangena ngokushesha kwi-webhusayithi yombukiso ukuze athumele izicelo zamadokodo, abambe iqhaza kulo mcimbi wemboni, futhi ajabulele i- "CHINAPLAS 2012 International Rubber and Plastics Exhibition". Insizakalo yokukhuthaza ehamba phambili enikezwa yibhizinisi.
Izivakashi zingabuye zibhalise ku-inthanethi ukuvakashela umbukiso wangonyaka ozayo, zikhiphe imali yokungena ye-RMB 20 futhi zithole izinzuzo eziningi.